Golaha xuquuqul insaanka oo maanta shiraya - BBC News Somali
Golaha xuquuqul insaanka oo maanta shiraya
Lahaanshaha sawirka UN PHOTO/JEAN-MARC FERRÉ
Golaha xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ayuu maanta Geneva uga billaabanayaa kal fadhigii sannadlaha ahaa.
Golaha oo loogu tala galay inuu noqdo kan ilaaliya ee horseedka ka noqda xuquuqul insaanka dunida ayaa eegi doona xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Kuuriyada Waqooyi iyo Burma, hareereynta iyo duqeymaha magaalada Xalab, iyo dagaallada Suudaanta Koonfureed.
Hase yeeshee golaha waxaa haysata dhaliil ah in la siyaasadeeyey, oo uu yahay mid fadhiid ah, marka la eego qaar ka mid ah tacaddiyada dunida ugu waaweyn ee xuquuqda aadanaha.
Golahani xaquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ayay ahayd in uu muujiyo mar kaste oo ay dhacayaan gabood falyada ka dhanka ah xaquuqul insaanka
Haseyeeshee xubnaha golahani ee xuquuqda u leh in ay codkooda dhiibtaan ayaa waxaa hadda ka mid ah waddamda Sacuudi Carabiya, Shiinaha iyo Venezuela oo dhammaantood xaaladdooda xaquuqul insaanka aad loo dhaliilay.
Dadka haysto abaalmarinta Nobel oo ku baaqay difaaca Rohingya
Dibad bax ka dhan ah dhibka haysto Muslimiinta Rohingya
QM oo cambaaraysay tacaddiyada lagu hayo Muslimiinta Rohingya ee Burma
Golahani ayaa baaritaan culus ku sameeyay colaadda Suuriya balse waxa uu ka gaabsaday in uu baaritaan ku sameeyo gabood falyo la sheegay in ay ka dhaceen dalka Yemen, sababo la xiriira cadaadis uga imaanayay Sucuudi Carabiya oo geysanaysay duqeymo lagu taageerayo dowladda Yaman, sida ay sheegeen kooxaha xaquuqul insaanka
Dhanka kale, Israa'iil ayaa ku andacooneysa in golahani uu aad u dhaliilay, waxaana Mareykanka oo ay aad xulufo u yihiin uu muujiyay debacsanaan aad u weyn, waxaana hadda jira hadallo la isla dhex marayo oo sheegaya in Mareykanka laga yaabo in uu golahani isaga baxo caro awgeed.
In la siyaasadeeyo arrimaha golahani ayaa laga yaabaa in aan laga baaqsan karin maadaama waddamada xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ay inta badan danahooda qaran siiyaan muhiimadda koobaad.
Balse kooxaha xaquuqul insaanka ayaa sheegaya in golahani uu qabto shaqooyin aad muhiim u ah oo ay ka mid yihiin arrimaha sida addoonsiga, jirdilka iyo arrimo badan oo gaar u ah waddankaste, isla markaana uu u baahan yahay taageero caalami ah.